IXESHA LE-EUPHORIA 2- YONKE INTO EKUFUNEKA UYAZI, IZENDAYA KUNYE NEMAUDE APATOW, NGABA I-RUE IYAFA EKUPHELENI KWELI XESHA, UHLAZIYO LWAMVA NJE, ISANDI SOKUDLALA KUNYE NEPLOT - IINKQUBO ZETV
Ixesha le-Euphoria 2- Yonke into ekufuneka uyazi, iZendaya kunye neMaude Apatow, Ngaba i-Rue iyafa ekupheleni kweli xesha, uHlaziyo lwamva nje, Isandi sokudlala kunye nePlot
Ixesha lesibini, i-Euphoria isetelwe ukubuya njengoko bekuhlala kufanelekile. Lo mdlalo ngumdibaniso waseMelika kuthotho lakwa-Israeli olunelo gama. Imincili yiyo yonke into
Ixesha2,Imincilingukonkesethaukuyayizabuya ngasemva wayenjalonjalokufanelekileukuya. Lo mdlalo ngumdibaniso waseMelika kuthotho lakwa-Israeli olunelo gama.
Imincili konke malunga neqela labakwishumi elivisayo ababandakanyeka kwisini kunye neziyobisi. Olu luhlu lutsala uninzi lolutsha.
Umboniso ubetha kakhulu kulutsha, inxulumene ikakhulu nendlela yabo yokuphila yemihla ngemihla kunye nengxaki abajongana nayo ngelixa bekhula.
Sinayo yonke into oyifunayo malunga nexesha le-Euphoria 2, ke qhubeka ufunda ukuze ufumane!
Iya kukhutshwa nini i-Euphoria isizini 2?
Umhla wokukhutshwa awukaqinisekiswa. I-HBO iqinisekisile Kwi-Twitter oko Imincili izakubuya ngamanye amaxesha ngo-2020.
Amalungu asisiseko aya kuhlala efana nalawo ayekwixesha lokuqala.
Kuza kwenzeka ntoni kuRue?
Ixesha loku-1 liphele ngokungalindelekanga njengoko uRue (edlalwa nguZendaya) ethatha isigqibo sokubuyela ekhayeni lakhe kunokuba abaleke noJules (Into esingayilindelanga), kodwa wazifumana ephinda ebuyela umva.
Ixesha lokugqibela le-1 lokugqibela bashiye ababukeli bejongile kwaye bexinzelelekile ukuba uRue uza kubuya kwisizini ye-2 okanye hayi. Ungakhathazeki! Umboniso wathi uRue unekamva eliqaqambileyo kwaye uya kuba phambili.
Kudliwanondlebe no-Elle, uZendaya wathi ngenxa yamathandabuzo awayenawo ngaye, lo mboniso wamnika amandla amaninzi.
Kwixesha lesibini siza kubona ukuba kuyakwenzeka ntoni ngo-Rue (naye ucinga ngokugula kwakhe ngengqondo) kwaye uyakuvuma ukuba uyamthanda uJules okanye hayi.
UMaude Apatow unokuba yi-21 kuphela, kodwa sele eceba ukuthatha i-Hollywood. Umdlali weqonga okwangoku udlala e-Euphoria, olona chungechunge lweTV lushushu kule hlobo, njengoLexi Howard, umhlobo osenyongweni kaZendaya wobuntwana.
U-Apatow ujonge ukuba sesona sisongelo siphindwe kathathu esivela eHollywood, enomdla wokubhala kwaye aqondise imovie yakhe.
Lonke ngelixa eqhubeka nomsebenzi wakhe wokuba ngumdlali weqonga.
Ngokomxholo, kuya kuba mnandi ukubona kwiXesha lesiBini: Bunjani ubomi xa woyisa imiceli mngeni yakho ixesha elide, ubuyela umva emva kokwenza isigqibo (sokuziphatha) esifanelekileyo?
Ungamamela phi kwi-Euphoria Soundtrack?
Isandi somculo sisetelwe ukukhutshwa ngokwamanani nakwivinyl yeDrama ye-HBO ye-Euphoria.
Amanqaku nguLabrinth kwisigqeba sedrake esivelisiweyo somboniso siza kuphuma nge-4 ka-Okthobha nge-vinyl iza ngomnye umhla .
Uyakwazi ukumamela isandi se-Euphoria kumaqonga amaninzi kubandakanya umculo weapile, i-youtube, njl.
thanda ixesha lomnqobi 3 itreyila
ingelosi yesibini edlala ingelosi
zingaphi izinto zasemzini iziqendu
Amaphupha amabi ekhitshini amaxesha 1 isiqendu 11
Ixesha le condor 2 cast